Budata Super High School Bus Driving Simulator 3D APK maka Android
Budata Super High School Bus Driving Simulator 3D
Free Budata maka Android (390.50 MB)
Budata Super High School Bus Driving Simulator 3D,
Ezigbo ụwa na -echere anyị na Super High School Bus Driving Simulator 3D, nke Games2win mepụtara.
Na Super High School Bus Driving Simulator 3D, nke dị netiti egwuregwu ịgba ọsọ ekwentị, anyị ga -anakọta ndị egwuregwu site na nkwụsị wee nwaa ibuga ha nụlọ akwụkwọ ha. Mmepụta ahụ, nke gụnyere eserese 3D na ezigbo ụgbọ ala ụlọ akwụkwọ, na-enye anyị ohere ịnweta ụgbọ ala dị iche iche nwere egwuregwu egwuregwu juputara na ya.
Enwere ihe karịrị ụgbọ ala 140 dị iche iche na mmepụta mkpanaka nwere okporo ụzọ dị larịị. Ụgbọ ala ndị a gụnyere bọs na ụgbọala. Mmepụta, nke gụnyere ọkwa 80 dị iche iche, na -enye ndị egwuregwu na ngalaba 5 dị iche iche. Enwere nnukwu obodo abụọ dị iche iche na egwuregwu ahụ, nke nwere ọnọdụ ịnya ụgbọ ala nefu. Nihi njikwa dị mfe, ndị egwuregwu ga -enwe ike ijikwa ụgbọ ala ha nenweghị nsogbu.
Super High School Bus Driving Simulator 3D, nke ndị egwuregwu karịrị nde 1 na -egwu, nweere onwe ya ibudata na Google Play. Mmepụta, nke ama ama netiti egwuregwu mkpanaka nwere akara 4q4, ga -enye anyị oge ntụrụndụ.
Super High School Bus Driving Simulator 3D Ụdịdị
Nha faịlụ: 390.50 MB